गफ ! .....: श्रद्धाञ्जली बाबुराम दाइलाई
Posted by दीपक जडित at 6:17 PM
मलाई पनि धेरै स्तब्ध बनायो दाइ इन्द्र लोहनीज्यूको दू:खद् निधनले । भर्खर टिभिमा अन्तिम संस्कारका लागि राखिएको उहाँको पार्थिव शरीर हेरेर आको मनै कस्तो अमिलो भइरको छ । अनुहार हेर्दा त अब जुरूक्क उठेर जय होस् भन्नुहुन्छ होला जस्तै लाग्ने !! मान्छेको जीबन पनि के हो के हो खै !!
मन पर्ने पल्ल घरे दाई बिते भने सबैको मन दुक्छ । आज इन्द्र लोहनी जस्ता होनहार संचारकर्मी गुमाउनु परेको छ हामीले । दु:ख लागेर आउछ । चाकरीवाला पत्रकारहरु भनाउदाहरुको अगाडि असली संचारकर्मिको उदाहरण ति ईन्द्र आज बिते । ति तपाईंका आफन्त पर्थे, गाउले पर्थे वा कोही तर ति हामी सबैका नेपाली पर्थे । आज तिनी गए हामीलाई छोडेर । सतिले सरापेको मेरो देश । ईन्द्र आज गए । हिजो उमा गइन । कालको अनेक स्वरुपले । जती डोरी बाते पनि एउटै गाठो । ईन्द्र लोहनी प्रती श्राधान्जली अनी परिवार प्रती समबेदना !!!
नेपाल आमाले एक होनहार सुपुत्र लाई गुमाइन । यो बियोग को घडीमा सम्पूर्ण नेपाली - लोहनी ज्यु को परिवार सबै सबै लाई इश्बर ले धैर्य धा र ण गर्न सक्ने छेमता दिउन ।
दिबगन्त आत्माले चिर शान्ती पाओस ।
भाबपूर्ण हार्दिक श्रादन्जली ।
साँच्चै धेरै मान्छे मर्छन् दीपकजी ! तर असमयिक निधनले मन पोल्छ । आँफै मरिन्छ अलिकता । झन् देशको लगि भुमिकदायि मान्छे गुमाउनु पर्दा कस्तो होला ?
अपूरणीय क्षति भयो ।
ईन्द्र दाईको आत्माले जहाँ गए पनि चैन पाओस् ।
उनकै शब्दमा- जय होस् भन्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दा'छू ।
रातको ११ बजेतिर इन्द्र लोहनीको निधनबारे News Flash को रुपमा टेलिभिजनको स्क्रोलबारमा देख्दा मलाई पत्याउन गाह्रो भाथ्यो। त्यो देख्नासाथ अरु कोही या दोस्रो व्यक्ति पो हो कि भनेर न्यूज च्यानल बदली बदली हेरे। अन्तिममा उनै कर्मशील इन्द्र लोहनी भएको भन्ने मनमा पक्का भएपछि त ज्यादै खल्लो अनि नरमाइलो लाग्यो। ठूलै क्षति भएको छ उहाँको निधनबाट। त्यस दिनदेखि मलाई उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको बहस को विज्ञापनमा देखिने दृश्य(जहाँ प्रश्नवाचक चिन्हहरु उहाँको वरिपरि छरपष्ट देखिन्थे)झैँ दिमागमा प्रश्नचिन्ह नै घुमीरहन्छ। आखिर किन देशको दक्ष, होनहार अनि व्यक्तित्वहरु नै अघि अघि बिदा हुनुपर्ने ? खैर हुने हुनार दैब नटार। जय होस्!!